न छाँदको माया, न काँधको काया
जतिसुकै राम्रो र आकर्षक भए पनि मानिसको अनुहार २० वर्षसम्म मानसपटलमा रहला। तर विचार २ हजार वर्षसम्म अमर रहन्छ। त्यसैले नेताहरुले जनताको घरमा हैन, मनमा बास बस्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। जिन्दगीमा जब ठूलाठूला वस्तुहरु मिल्छन् तब सानालाई भुल्ने गल्ती किमार्थ नगर्नु किनकि जुन काम सियोले गर्न सक्छ, त्यो काम तरबारले गर्न सक्दैन।
कमान खुस्केको घडी र इमान निख्रिएको नेतृत्व
हामी भोट ईश्वर पोखरेललाई खन्याउँछौं, आँसु उज्ज्वल थापाको नाममा बगाउँछौं। दीपक मनाङेलाई चेप्छौं, डा. हर्क गुरुङलाई किताबमा पढ्छौं। डा. गुरुङको भिजनअनुसार ५ प्रतिशत मात्र काम भएको थियो भने मुलुक कायाकल्प हुने थियो।
सर्वहाराको शासन, गरिबको सत्ता, जनवाद यी सबै पण्डित र धामीका मन्त्रजस्तै हुन्। गुजुल्टिएको चाउचाउ सीधा होला तर यी शब्दको अर्थ बुझ्न कठिन छ।
केपी ओलीको मातप्रति एउटा लक्षणा
कोही पोखरा, कोही महेन्द्रनगर, कोही झापा पुग्ने राजनीतिक स्वार्थ बोकेका नेताहरु सार्वजनिक खपत र पदीय स्वार्थका लागि एउटै गाडीमा चढेर यात्रा आरम्भ गरे। जब मुग्लिङ आइपुग्यो, त्यसपछि माथापच्ची सुरु भयो।
शासन, रासन र भाषण
देशको भूगोलमुनि आफूलाई राख्ने लालबहादुर र देशमाथि राखेर ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने मोदी दम्भका कारण भारतका सवा अर्ब नागरिक कोभिड आतंकबाट प्रताडित छन्।
लक्कुमा बिकेको लोकतन्त्र
हरेक क्षेत्रमा चुनावलाई लोकतन्त्रको पहिलो सर्त बनाउँदा देशमा आर्थिक असन्तुलन मात्र आएको छैन, सामाजिक अपराध वृद्धि भएका छन्। वर्षैभरि दर्जनौं संघसंस्था, वर्गीय संघसंगठनका चुनाव भएकै छन्।
इच्छा नलागेको खान्न भन्न पाइन्छ, नराम्रो लागेको लाउँदिनँ भन्न स्वतन्त्रता रहन्छ तर बूढो हुन्न भन्न पक्कै पाइन्न। जसरी भाले नबासेर बिहान हुन छोड्दैन, त्यसरी नै मानिसले मान्नु नमान्नुमा प्रकृतिका नियम फेरिँदैनन्।